कोशी अनलाइन शनिबार, १७ कार्तिक, २०७५ मा प्रकाशित
विराटनगर, कात्तिक १७
दैनिक जीवनमा मानिसले मोबाइल फोनमा ब्याट्री नहुँदा वा समयमै चार्ज नहुँदा सास्ती झेलिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीं मोबाइल चाँडै चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्ने ? कसरी मोबाइलको ब्याट्री चाँडै चार्ज गर्न सकिन्छ ? यसबारे केही उपयोगी टिप्स यहाँ छन् ः
मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस्
चाँडो ब्याट्री चार्ज गर्न यो एकदमै सामान्य र सजिलो तरिका हो । यसो गर्दा ब्याट्री एकदमै तीव्र गतिमा चार्ज हुन्छ । कसरी भने, फ्लाइट मोडमा मोबाइल राख्दा सबै ‘फङ्सन’ बन्द हुँदैनन् । तर, त्यसबेला फोन आउने तथा गर्न मिल्दैन । साथै, अन्य जिपिएस फिचर पनि बन्द हुन्छन् ।
फोन पूरै बन्द गरिदिनुहोस्
मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्ने मामिलामा केही भ्रम फैलिएका छन् । त्यसमध्ये फोन अन नै राखेर चार्ज गर्दा बिग्रिन्छ भन्ने एक हो । तर, यो गलत हो । चलिरहेको फोन चार्ज गर्नु नराम्रो हुँदैन । तर, बन्द गरेर चार्ज गर्दा भने निकै चाँडो चार्ज हुन्छ ।
युएसबी पोर्ट वा केबुलबाट चार्ज नगर्नुहोस्
मानिसले ल्यापटप वा अन्य युएसबी पोर्टबाट पनि चार्ज गर्छन् । तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कि, युएसबीबाट भन्दा बिजुलीबाट धेरै छिटो चार्ज हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म मोबाइल बिजुलीबाटै चार्ज गर्नुहोस् ।
तापक्रम मिलाउनु आवश्यक
सामान्यतः तात्ने गरी ब्याट्री राख्दा यसको क्षमतामा ह्रास आउँछ नै । उदाहरणका लागि गर्मी मौसममा मोबाइलको ब्याट्रीको क्षमता खराब हुन्छ । फोनलाई घामबाट त सधैं टाढा राख्नुपर्छ ।
जुनसुकै चार्जर प्रयोग गर्नु हुँदैन
मानिसले अक्सर चार्ज हुने जुनसुकै चार्जरबाट पनि मोबाइल चार्ज गर्ने गर्छन् । तर, यो गलत हो । सबै चार्जर एउटै देखिन्छन्, तर एउटै भने कहिल्यै हुँदैनन् । सबैभन्दा राम्रो त फोनको आधिकारिक चार्जरबाट मात्र चार्ज गर्नु हुन्छ । अन्यथा, चार्जरमा त खराबी आउँछ नै, तपार्ईंको फोनमै पनि खराबी आउन सक्छ ।